Taariikhda Masjidka Buluuga ee Istanbul | Safarka Wararka
Taariikhda Masjidka Buluuga ah ee Istanbul
Mariela Carril | 13/01/2022 17:00 | Istanbul, Maxaa la arkaa
Mid ka mid ah kaararka boostada ee ugu caansan Turkiga waa Masjidka caanka ah ee Buluugga ah ee ka soo horjeeda cirka Istanbul. Soo jiidasho leh, qurux badan, qaloocsan, waxaa jira tilmaamo badan oo shaqadan qaab dhismeedka iyo farshaxanka isku mar ah.
Safarka Istanbuul ma noqon karo mid sinaba u dhamaystirmi kara iyada oo aan la booqan dhismahan qiimaha leh UNESCO waxay ku dartay liiska Goobaha Dhaxalka Adduunka 1985kii. Si aad markaas u ogaato taariikhda Masjidka Buluuga ee Istanbul.
Masjidka buluuga ah
Magaceeda rasmiga ahi waa Masjidka Suldaan Axmed waxaana la dhisay bilowgii qarnigii toddoba iyo tobnaad (laga bilaabo 1609 illaa 1616), hoos taliskii Axmed I. Waa qayb ka mid ah isku dhafan, caadi ah kulliye, oo uu sameeyay masaajidka iyo waxyaabo kale oo ku tiirsan oo noqon kara musqulo, jiko, rooti iyo kuwo kale.
Waa kan qabrigii Axmed I laftiisa, waxaa ku yaal hospice iyo sidoo kale a madrid, xarun waxbarasho. Dhismihiisu waxa uu ka sare maray masaajid kale oo Turki ah oo aad caan u ah, kaas oo lagu magacaabo Hagia Sophia Kee ah albaabka xiga, laakiin waa maxay sheekadiisu?
Marka hore waa in maskaxda lagu hayaa in Boqortooyadii Cusmaaniyiinta ay ogaatay sida wax looga qabto Yurub iyo Aasiya. Socdaalkiisii ​​uu ku galay qaaradda Yurub ayaa ahaa mid kala duwan oo laga cabsi qabay, gaar ahaan khilaafkii uu kala dhexeeyey boqortooyada Habsburg.
Dareenkan, iska horimaadkii u dhexeeyay labadooda wuxuu dhammaaday 1606 oo la saxiixay Heshiiska Nabadda ee Sitvatorok, ee Hungary, inkastoo maanta xarunta shirkadu ay ku hadhay Slovakia.
Nabadda ayaa la saxiixay 20 sano iyo heshiiskii Waxaa u saxiixay Archduke Matthias oo u dhashay Austria iyo Sultan Ahmed I. Dagaalku wuxuu keenay khasaare badan oo kuwa kale lagu daray dagaalkii Faaris, sidaas darteed waaga cusub ee nabadda Suldaanku waxa uu go’aansaday in la dhiso masaajid aad u weyn oo dib loogu soo nooleeyo awooddii Cusmaaniyiinta. Masaajid Imperial ah lama dhisin ugu yaraan afartan sano, laakiin lacag ayaa ka maqan.
Masaajidyadii hore ee boqortooyadu waxay ku dhisnaayeen faa'iidada dagaalka, laakiin Axmed oo aan guulo waaweyn ka soo hoynin, wuxuu lacag ka qaatay hantidii qaranka, sidaas darteed, dhismihii socday intii u dhaxaysay 1609 iyo 1616 ma ahayn mid aan dhaleecayn uga imaanin culumada islaamka. . Ama ma jeclayn fikradda ama ma jeclayn Axmed I.
Dhismaha, meesha uu ku yaal qasrigii boqortooyadii Byzantine ayaa la doortay, kaliya horteeda Hagia Sofia basilica kaas oo wakhtigaas ahaa masaajidka ugu weyn ee Imperial ee magaalada, iyo hippodrome, oo labadaba la yaab leh iyo dhismayaal muhiim ah oo laga dhisay Istanbul hore.
Waa sidee Masjidka Buluugga ah? Waxay leedahay shan qubbadood, lix minaaradood, iyo siddeed kale oo qolal sare ah. Waxaa jira xubno Byzantine ah qaarkood, qaar la mid ah kuwa Hagia Sofia, laakiin guud ahaan khadadka raacaya naqshad Islaami ah oo soo jireen ah, oo aad u heersaraysa. Sedefkar Mehmed Aga waxa uu ahaa naqshadeeye waxa uuna ahaa arday aad ugu wanagsan Master Sinan, madaxa naqshadaha Cusmaaniyiinta iyo injineerka madaniga ah ee dhowr suldaanno.
Ujeeddadiisu waxay ahayd macbad weyn oo aad u haybad leh. Oo isna wuu gaadhay! Gudaha masjidka waxaa lagu qurxiyey in ka badan 20 kun oo alwaaxyo dhoobo ah oo nooca Iznik ah, Magaalada gobolka Turkiga ee Bursa, oo taariikh ahaan loo yaqaan Nicaea, in ka badan 50 qaab iyo tayo kala duwan: waxaa jira kuwa dhaqameed, waxaa jira ubaxyo, cypresses, miraha ... Heerarka sare waa halkii buluug, oo leh in ka badan 200 oo dariishado midab leh taas oo u oggolaanaysa marinka iftiinka dabiiciga ah. Iftiinkani waxa uu caawimo ka helayaa chandeliers gudaha ku jira iyo in, iyana, ku lahaa ukun gorayada gudaha tan iyo markii la rumaysnaa in ay ka cabsadaan caarada.
Ku saabsan qurxinta waxaa jira aayado quraanka kariimka ah oo uu sameeyay mid ka mid ah farshaxan-yaqaannada ugu wanaagsan ee waagaas, Seyyid Kasin Gubari, iyo sagxadaha ayaa leh roogag ay ku deeqeen kuwa aaminka ah kuwaas oo la bedelayo markay daalan yihiin. Dhanka kale, daaqadaha hoose, kuwaas oo la furi karo, sidoo kale leh qurxinta quruxda badan. Qubbad-dhiman kasta markeeda waxa ay leedahay dariishado badan, oo ku saabsan 14, laakiin qubbad dhexe waxay ku daraysaa ilaa 28. Qurux badan. Gudaha waa sidaas, runtii cajiib ah.
El mihrad waa waxa ugu muhiimsan gudaha, oo ka samaysan marmar quruxsan, oo ay ku hareeraysan yihiin dariishadaha iyo darbi dhinac ah oo ay ka samaysan yihiin alwaaxyo dhoobo ah. Waxaa ku xiga minbarka oo uu imaamku taagan yahay khudbadii uu jeedinayay. Laga soo bilaabo meeshaas waxaa u muuqda dhammaan kuwa gudaha ku jira.
Waxa kale oo jira dukaan boqortooyo oo ku yaal hal gees, oo leh madal iyo laba qol oo dib u gurasho ah oo siiya marin u helka masraxa boqortooyada ama hunkar Mahfil oo ay taageerayaan tiirar marmar ah oo badan iyo mihrab u gaar ah. Laambado aad u badan ayaa masaajidka yaalla oo u ekaa albaabka jannada laga galo. Qof walba waa lagu qurxiyey dahab iyo dhagaxyo qaali ah oo sidaan kor ku sheegnay, gudaha weelasha dhalada ah waxaad ku arki kartaa ukunta gorayada iyo kubbado dhalo badan oo lumay ama la xaday ama ku dhex jira madxafyada.
Oo waa sidee bannaanku? Wajigu waa oo la mid ah kii Masjidka Suleymaan, laakiin waa lagu daray Qulqullo gees ah iyo turrets. Fagaarahani waa inta uu le'eg yahay masaajidka laftiisa, waxaana uu leeyahay dhowr gadood oo ay ku yaalliin meelo ay dadka mu'miniinta ah ku soo xajiyaan. Waxaa jira a farta afar geesoodka dhexe waxaana jira dugsi taariikhi ah oo maanta u shaqeeya sidii xarun macluumaad, oo ku taal dhinaca Hgaia Sofia. Masjidka wuxuu leeyahay lix minaar: geesaha waxaa ku yaal afar, mid walbana wuxuu leeyahay saddex balakoon, laba kalena waxaa ku yaal dhammaadka barxadda oo leh laba balakoon oo keliya.
Sharaxaaddani waxa laga yaabaa inaanay u weynayn sida in qof ahaan loo arko. Y waxaad leedahay aragtida ugu fiican haddii aad ka soo dhawaato hippodromeama, dhanka galbeed ee macbudka. Haddii aadan Muslim ahayn, waa inaad sidoo kale halkan soo booqataa. Waxay ku talinayaan in aan muhiimad la siin dadka ku furan albaabka laga soo galo, isku dayaan inay wax iibiyaan ama inay ku qanciyaan in samaynta khadka aysan muhiim ahayn. Sidaas maaha. La joog inta kale ee martida ah.
Talooyin ku saabsan booqashada:
Waxaa lagu talinayaa in la tago bartamaha subaxda. Shan salaadood ayaa la tukadaa maalintii kadibna masaajidku wuxuu xidhaa 90 daqiiqo salaad kasta. Iska ilaali Jimcaha, gaar ahaan.
Kabo la'aan ayaad soo galaysaa oo waxaad ku riddaa bac ay albaabka laga galo lacag la'aana.
Ogolaanshuhu waa bilaash.
Haddii aad naag tahay, waa inaad madaxa dabooshaa, haddii aadan haysan wax adiga kuu gaar ah, waxay sidoo kale ku siinayaan wax bilaash ah oo aad ku daboosho. Qoorta iyo garbaha waa in sidoo kale la daboolaa.
Masaajidka gudihiisa waa inaad iska aamustaa, sawir ha ku qaadin si toos ah oo ha sawirin, hana aad u fiirsan kuwa halkaas ku tukanaya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Magaalooyinka » Istanbul » Taariikhda Masjidka Buluuga ah ee Istanbul
Taariikhda burburkii Roomaanka ee xeebta Bolonia